Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka tacsiyadeeyay geerida majaajiliiste Sooraan – Kalfadhi
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka tacsiyadeeyay geerida majaajiliiste Sooraan
May 26, 2021 Hassan Istiila
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Alle ha u naxariistee majaajiliiste Sooraan Ismaaciil Sugulle, oo maanta ku geeryooday magaalada Burco.
Marxuumka wuxuu sidoo kale ahaa Abwaan iyo jilaa ay Soomaalidu aad u daawan jireen muuqaalladiisa.
“Eebbe ha u naxariisto hal abuurkii, fannaankii iyo jilaagii weynaa ee Sooraan Ismaaciil Sugulle oo ku geeriyooday Burco. Sooraan waxa uu ka mid ahaa hal abuurrada sida weyn uga qeyb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed fankiisa iyo sheekooyinkiisuna ahaayeen kuwo farriin xambaarsan”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble
Sooraan wuxuu caan ku ahaa sheekooyin ay inta badan isla soo jili jireen Abwaan Jawaan oo ay saaxiibo ahaayeen. In muddo ah ayuu abwaanku xanuunsanaa, waxaana dhowr jeer oo hore si been abuur ah loo shaaciyay inuu dhintay.
Madaxweynaha Galmudug iyo safiirka Midowga Yurub oo ka ka wadda-hadlay mashaariic kaabayaal dhaqaalla ah
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Puntland 18 kun oo dollar ku wareejiyay guddiga xallinta shaqaaqo ka dhacday miyiga